Macdanta King Sulaymaan (qaybta 21), Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
“Gaadhigayga ayaan dhigan doonaa,” Tom wuxuu ku yidhi dukaanlaha. "Haddaanan soo noqon sideed usbuuc gudahood, sida muuqata ma noolaan doono." Dukaameeyihii wuxuu u eegay sidii nin waalan oo hortiis jooga. Sideed todobaad? Taas kama badbaadi doontid laba toddobaad! ”Tom Brown jun. waa qof jecel dhiirrigelin. Hadafkiisuna wuxuu ahaa in la ogaado haddii uu ku sii hayn karo cidlada Dhimashada - aagga ugu qoto dheer, ugu qallalan Waqooyiga Ameerika iyo dunida ugu kulul - inbadan. Ka dib wuxuu qoray in xaaladaha lamadegaanka ay ka doonayaan isaga wax ka badan wixii uu soo maray. Weligiis noloshiisu aad uma harraadin. Isha ugu weyn ee biyaha la cabbo waxay ahayd sayax. Habeen walba wuxuu diyaarsadaa aalad si uu ugu helo dharab, sidaa darteed wuxuu aruuriyey biyo ku filan oo la cabbo subaxdii. Tom ugu dhakhsaha badan lumiyay hankiisii ​​jadwalka taariikhda iyo sagaal usbuuc ka dib wuxuu go'aansaday in la joogo waqtigii guriga la aadin lahaa Wuxuu gaadhay yoolkiisii, laakiin wuxuu qirayaa inuusan noolaan lahayn haddii uusan dharab lahayn.
Immisa jeer ayaad u malaynaysaa dharab? Hadday dareemaan aniga oo kale, maahan marar badan - ilaa ay waajib kugu tahay inaad mashiinka uga tirtirto suuligaaga subaxnimada! Laakiin dharabka ayaa ka badan roobka daaqadaha baabuurkayaga (ama wax sababa fowdo garoonka dhexdiisa)! Isagu waa naf bixiyaye. Waxay nafaqeysaa, harraysaa oo harraysaa. Wuxuu goostaa u beddelaa shuqullo faneed.
Waxaan la joogi jiray qoyskeyga maalmo badan beero inta lagu jiray fasaxa xagaaga. Badanaa waaberigii waan kici jirnay oo aabbahay iyo aniguba waxaan ugaarsan jirnay. Waligey ma hilmaami dhalaalnimada subaxda markii rayskii ugu horreeyay ee qorraxda ay dhibic ku daadisay geedaha, cawska iyo dhirku u iftiimaan oo u muuqdaan sidii dheeman. Cobwebs waxay u ekaayeen silsilado dahab ah iyo ubaxyo engegay maalintii hore waxay umuuqdeen inay ku ciyaarayaan quwad cusub nalka subaxnimada.
Dib-u-cusboonaysiin iyo firfircooni
Wax dan ah igama helin dhadhanka ilaa inta laygu dhiirrigeliyey ka fikiridda ereyada Maahmaahyadii 19,12:XNUMX. Ceebtii boqorku waa sida libaaxa cidiisa, Laakiinse nimcadiisu waa sida sayaxa cawska ku dega.
Waa maxay falcelinteyda koowaad? Hadalkan aniga ima quseeyo. Anigu boqor ma ahi, oo kuma hoos noolaado boqor. ”Ka dib markaan ka fikiray wax kale waxaan ka fikiray wax kale. Ma ahan wax adag in la fahmo sida loo isbarbardhigo sharaf dhac boqorka ama xanaaq iyo libaax libaax. Soo jiidashada cadhada dadka (qaasatan kuwa awooda maamulka) waxay noqon kartaa mid cabsi leh - oo aan ka aheyn la kulanka libaaxa xanaaqsan. Laakiin waa sidee nimcada sida sayaxa oo kale cawska? Qoraalladii nebiyadii Miikaah waxaan ka akhrinnay dad qaarkood oo isu muujiyay inay daacad u yihiin Ilaah. Iyagu waxay noqon doonaan sidii “sayaxa xagga Rabbiga ka yimid, iyo sidii roob roob doog ah ku daadanaya" (Mi 5,6: XNUMX).
Saamaynta ay ku leeyihiin dadka ku xeeran waxay ahayd mid firfircooni iyo xasilooni leh, sida saamaynta sayaxa iyo roobka u yeeshay doogga. Sidoo kale, aniga iyo anigu waxaan nahay dharabka Ilaah ee nolosha kuwa aan xiriirka la leenahay. Sida geedka uu uraadku dhasho ee dhalatada nololeed - oo u bislaanaya - waxaan nahay qaabkii Eebbe uugu keenay adduunka rabbaaniga ah (1 Yooxanaa 4,17:14,6). Ilaah waa ilaha dharabku (Hos XNUMX) oo isagu aniga iyo adiga ayuu idiinka doortay qaybteenna.
Sideen ugu noqon karnaa ciidaha ee nolosha dadka kale? Tarjumid kale oo ka timid Maahmaahyadii 19,12:5 ayaa caawisa: "Boqorka xanaaqiisu waa u liqaa sida libaax ciyaya, laakiin naxariistiisu waa sida sayaxa cawska ku dega" (NCV). Erayada naxariistu waxay noqon karaan sida dhibicyo sayax ah oo dadka ku xidhma oo nolosha bixiya (Sharciga Kunoqoshadiisa 32,2: XNUMX). Mararka qaarkood waxay qaadataa wax yar oo caawimaad ah, qosol, dhunkasho, taabasho, suulka ama sanka oo la isku raaco in la cusbooneysiiyo oo dib loo soo nooleeyo qof. Waxaan sidoo kale u duceysan karnaa kuwa kale oo aan la wadaagi karnaa rajada aan u hayno iyaga. Waxaan nahay aalladii Ilaah ee jiritaankiisa shaqada, qoysaskeenna, kaniisadahayagii - iyo ciyaar. Saaxiibkey Jack wuxuu ii sheegay sheekada soo socota:
Waxay ahayd qiyaastii seddex sano markii aan ku soo biiray naadigeenna maxalliga ah. Ciyaartoyda badankood waxay yimaadaan 13 p.m. ciyaartuna waxay bilaabataa 40 daqiiqo ka dib. Intii lagu gudajiray xilligaan kala guurka ah, ciyaartoydu way wada fadhiisteen oo waan wada sheekeysteen, laakiin inta lagu gudajirey sannadihii ugu horreeyay waxaan go’aansaday inaan gaarigeyga ku jiro oo aan sameeyo waxoogaa barashada Bible ah. Isla markii ay ciyaartoydu qaateen kubbadooda, waxaan doonayey inaan halkaas tago oo aan galo cagaarka qaanso. Dhowr bilood ka hor waxaan go'aansaday inaan wax u qabto naadiga halkii aan wax ka baran lahaa. Waxaan raadsaday goob firfircoon oo shaqo ka helay aagga miiska laga soo galo. Daraasiin koob oo muraayadaha indhaha ah ayaa laga soo saaray saxanka oo lagu meeleeyay dillaaca; biyo, baraf iyo cabitaanno qabow iyo sidoo kale biir ayaa lagu bixiyaa qolka naadiga. Waxay qaadatay nus saacad fiican, laakiin runtii waan ku riyaaqay shaqada. Cagaarka Bowling waa meelaha aad ku sameyn karto ama ku soo gabagabayn karto saaxiibtinimo. Aniga waxaan ka xumahay, nin jilicsan oo aniga iyo madaxdeena ah ayaa isku dhacnay madaxdeena, sidaas ayaan meel fog u tagnay. Sikastaba, waad qiyaasi kartaa inta aan la yaabay iyo, tan ugu muhiimsan, aad ayaan ugu farxay markii uu ii yimid oo igu yiri: 'Xaqiiqada aad halkaan ku sugan tahay ayaa isbeddel weyn ku ah kooxda!'
Waxay noqon kartaa mid sahlan oo hadana aad u muhiim ah. Sida sayaxa arooryadeed cawskayaga. Waxaan u xasili karnaa si degan oo naxariis leh isbedel ku samee nolosha kuwa aan la xiriirno. Waligaa ha iloobin saameynta aad ku yeelanayso. Maalintii Bentakostiga, Ruuxa Quduuska ah ayaa rumeeyey 120 rumaystayaal ah. Waxay ahaayeen dad caadi ah oo aniga iyo adiga ahba, haddana waxay ahaayeen isla dad iyagu markii dambe "dunida u rogay". In ka yar laba boqol oo dhibic oo sayax ah ayaa ku dhibay adduunka oo dhan.
Waxaa jira aragti kale oo oraahdan. Haddii aad ku jirto booska maamulka, markaa waa inaad tixgelisaa waxa ay ereyadaada iyo ficiladaadu kicinayaan ku-xigeennadaada. Loo shaqeeyuhu waa inuu ahaado mid naxariis leh, saaxiibtinimo iyo caadil ah (Maahmaahyada 20,28). Ninku waa inuusan waligiis ula dhaqmin xaaskiisa si xun (Col 3,19:3,21) waaliddiintuna waa inay ka fogaadaan inay caruurtooda ku niyad jabiyaan iyagoo si aada u dhaliila ama kadeeday (Kolosay XNUMX:XNUMX). Bedelkeeda, waxaad noqotaa sidii sayax oo kale. U ogolow quruxda jacaylka Eebbe inuu ka muuqdo qaab nololeedkaaga.
Hal fikir dhamaadka. Soo bixiddu waxay u adeegtaa ujeedkeeda - qaboojiso, qurxisaa oo nolosha siisaa. Laakiin dhibic dhidid ma dhidid marka aad isku dayeyso inaad mid noqoto! Waxaad tahay dhaartii Ilaah si fudud adoo ah Ciise Masiix. Tani kuma saabsana mashruucyada iyo istiraatiijiyadda. Waa lafdhabarta, waa dabiici. Ruuxa Quduuska ahi wuxuu abuuraa nolosha Ciise noloshiisa. U soo ducee inuu naftiisu ku dhex socdaba. Kaliya naftaadu noqo - dhibic yar oo sayax ah.